Who Are Risk For Carcinoma Pancreas? – My Doctor
Who Are Risk For Carcinoma Pancreas?
ဆီးချိုရောဂါသည် နာတာရှည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များသောကြောင့် ဖြစ်သော ဇီဝကမ္မကမောက်ကမ ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်ပေသည်။ ဆီးချိုကြောင့် မျက်စိကွယ်ခြင်း၊ ခြေလက်ပိုးဝင်ကာဖြတ်ရခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ လေဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းနှင့် အခြားပြဿနာများစွာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရှိလာကြသည်။
ဆီးချိုရောဂါသည် ပန်ကရိယအိတ်အတွင်းရှိ အင်ဆူလင်ထုတ်သော ဘီဆဲလ်အရေအတွက် လျော့နည်းခြင်း၊ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သော်လည်း ဆီးချိုကြောင့် ပန်ကရိယကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟူသော အချက်ကို လေ့လာတွေ့ရှိထားခြင်း မရှိပေ။ သို့သော် ပန်ကရိယကင်ဆာဖြစ်ပွားသူသည် ဆီးချိုရောဂါလက္ခဏာဖြင့် ပြသတတ်ကြောင်းကိုတော့ တွေ့ရှိသိထားပေသည်။
ထို့ကြောင့် ပန်ကရိယကင်ဆာသည် မည်သည့် လက္ခဏာများဖြင့် ပြသတတ်ပါသနည်း။
ဗိုက်အောင့်ခြင်း-ဝမ်းဗိုက်အပေါ်ပိုင်းတွင် အောင့်လေ့ရှိပြီး နောက်ကျောသို့ ပြန့်သွားလေ့ရှိသည်။ ကိုယ်ကို ရှေ့သို့အနည်းငယ် ကိုင်းညွှန့်လိုက်ပါက သက်သာသွားလေ့ရှိသည်။
အသားဝါခြင်း- အစာချေရည်သွားသောလမ်းကြောင်းနှင့် သည်းခြေလမ်းကြောင်းဆက်သွားသောနေရာတွင် ပိတ်သွားပါက အသားဝါကာ ယားယံခြင်းဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာပြတတ်ပါသည်။
အူသိမ်ပိတ်သောလက္ခဏာများ- အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျောခြင်း၊ တို့အပြင်
ပန်ကရိယရောင်ခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း စသောဝေဒနာများနှင့်လည်းပြသတတ်ပါသည်။
သို့သော် ရောဂါနုစဉ်ပင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ အလျင်အမြန်ပြန့်နှံ့တတ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာများမှာ မထင်ရှားသဖြင့် ရောဂါဖြစ်ကြောင်း သိသောအခါ၌ပင် ကုသ၍ မရသော အဆင့်ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ပန်ကရိယကင်ဆာသည် မည်သူတို့တွင် ပို၍ အဖြစ်များပါသနည်း။
အသက်ကြီးသူများ- အသက် ၇၀ကျော် လူကြီးများ အယောက် တစ်သိန်းတွင် တစ်ရာဖြစ်နိုင်ပေသည်။
အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ၂ဆ ပိုဖြစ်လေ့ရှိသည်။
မျိုးရိုးအတွင်း မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ခြင်း၊ အူမကြီးကင်ဆာ၊ အရေပြားဆဲလ် melanoma syndrome၊ ရှိသူများ
ဖော်ပြပါဝေဒနာများ ခံစားနေသူများသည် တတ်ကျွမ်းသူ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်၍
တီဗွီဓာတ်မှန်ခေါ် USG ရိုက်ခြင်း
အစာအိမ်မှန်ပြောင်းမှတစ်ဆင့် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ အသားစယူခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပေသည်။
အခြားသောကင်ဆာရောဂါများ ကဲ့သို့ပင် ရောဂါနှင့် လူနာအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကုသမှုခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းအပြင် ယခုအခါ ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်နှုန်းပိုများလာကြောင်း အားတက်ဖွယ် တွေ့ရှိနေရပြီ ဖြစ်ပါသည်။
tin su	2018-01-11T13:37:47+00:00	October 12th, 2017|Categories: ကင်ဆာ, ကျန်းမာရေး( က-အ ), ကျန်းမာရေး( ပ ), အထွေထွေရောဂါများ|0 Comments